राम्ररी अनुकूलित विनम्र सूत्रहरूको साथ आफ्नो व्यावसायिक इमेलहरू बढाउनुहोस्
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | नोभेम्बर 26, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
व्यावसायिक इमेलको अन्त्यमा विनम्र सूत्रहरू सम्भव छ
भवदीय, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, हार्दिक अभिवादन... यी सबै एक व्यावसायिक इमेलमा प्रयोग गर्नका लागि विनम्र अभिव्यक्तिहरू हुन्। तर तिनीहरू मध्ये प्रत्येक एक विशेष अर्थ छ। यो एक विशेष प्रयोग र प्राप्तकर्ता अनुसार पनि प्रयोग गरिन्छ। तपाईं एक कार्यालय कर्मचारी हुनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो व्यावसायिक लेखन को गुणस्तर सुधार गर्न चाहनुहुन्छ। यस लेखले तपाईंलाई दुई धेरै सामान्य विनम्र अभिव्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न कुञ्जीहरू दिन्छ।
विनम्रता: साथीहरू बीच प्रयोग गर्न को लागी विनम्र वाक्यांश
"निष्ठापूर्वक" शब्द एक विनम्र वाक्यांश हो जुन एक विशेष सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, हामीले यसको ल्याटिन उत्पत्तिलाई सन्दर्भ गर्नुपर्छ। "भवदीय," ल्याटिन शब्द "कोर" बाट आएको हो जसको अर्थ "हृदय" हो। त्यसैले उहाँले "मेरो सारा हृदयले" व्यक्त गर्नुहुन्छ।
तर, यसको प्रयोगमा धेरै परिवर्तन आएको छ । ईमानदारीपूर्वक, अब सम्मानको चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो विनम्र सूत्र हाल तटस्थता द्वारा चिन्हित छ। हामी वास्तवमै नचिनेको व्यक्तिसँग पनि यसको सहारा लिन्छौं।
यद्यपि, तपाइँ र तपाइँको संवाददाता बीच सामूहिकता को एक निश्चित अनुमान छ। कम्तिमा, यो मानिन्छ कि तपाईंसँग लगभग एक बराबर पदानुक्रमिक स्तर छ।
थप रूपमा, हामी तपाईंको संवाददातालाई थप सम्मान देखाउनको लागि विनम्र वाक्यांश "भवदीय" पनि प्रयोग गर्छौं। यसैले हामी जोड सूत्रको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
यद्यपि, तपाइँ सहकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि व्यावसायिक इमेलमा छोटो फारम "CDT" प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
उत्तम सान्दर्भिक: एक पर्यवेक्षकलाई सम्बोधन गर्न विनम्र वाक्यांश
अघिल्लो सूत्रको विपरित, विनम्र सूत्र "उत्तम सान्दर्भिक" ले आदानप्रदानलाई थप गम्भीरता प्रदान गर्दछ। यो एकदम सामान्य छ किनभने हामी एक वरिष्ठसँग कुरा गर्दैछौं। जसले "सबै शुभकामना" भन्छ, वास्तवमा "चयनित अभिवादन" भन्छ। त्यसैले यो तपाइँको वार्ताकार को लागी विचार को एक चिन्ह हो।
रिड पत्र टेम्पलेट तपाइँको payslip प्राप्त गर्न अनुरोध गर्न
यदि "सबैभन्दा धेरै शुभकामना" भन्ने वाक्यांश आफैमा पर्याप्त छ भने पनि, यो भन्नु उचित हुन्छ: "कृपया मेरो शुभकामना स्वीकार गर्नुहोस्"। सूत्रीकरणको लागि, "कृपया मेरो हार्दिक अभिवादनको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्नुहोस्", यो केहि विशेषज्ञहरूको विचारमा गलत छैन।
यद्यपि, पछिल्लाले यो थाहा पाउँछ कि त्यहाँ अनावश्यकता को केहि रूप छ। वास्तवमा, अभिवादन आफैमा एक अभिव्यक्ति हो।
कुनै पनि तरिका, यो विनम्र सूत्रहरू र तिनीहरूको उपयोगिता मास्टर गर्न राम्रो छ। तर त्यहाँ अझै पनि आफ्नो वृद्धि गर्न अन्य आवश्यकताहरू छन् ईमेल व्यावसायिक। जस्तै, तपाईंले सन्देशको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईंको इमेलको अवमूल्यन गर्नबाट गल्तीहरू रोक्न पनि यो आवश्यक छ।
यो गर्नका लागि, तपाइँका इमेलहरू Word मा लेख्न वा व्यावसायिक सुधार सफ्टवेयरमा लगानी गर्न सल्लाह दिइन्छ।
थप रूपमा, तपाईंलाई यो थाहा नहुन सक्छ, तर स्माइलीको प्रयोग पनि सिफारिस गरिएको छैन, जस्तै "पक्की" प्रकारको व्यावसायिक इमेल हो।
राम्ररी अनुकूलित विनम्र सूत्रहरूको साथ आफ्नो व्यावसायिक इमेलहरू बढाउनुहोस् नोभेम्बर 26th, 2021Tranquillus
अघिल्लोफ्रान्स र जर्मनीमा ransomware आक्रमणको खतरा ANSSI र BSI द्वारा देखियो
निम्नआफ्नो पर्यवेक्षकलाई इमेल पठाउनुहोस्: कस्तो प्रकारको विनम्र सूत्र प्रयोग गर्ने?
तपाईलाई काममा रणनीति लेख्ने बारे सबै कुरा जान्नु आवश्यक छ
टेम्प्लेट इमेलबाट एक पर्यवेक्षकबाट जानकारीको लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिन
व्यावसायिक इमेल, परिचित सूत्रहरू बेवास्ता गर्नुहोस्!
तपाईका लेखहरूमा मास्टर सामग्री र फारम